धनि बाउका बि’ग्रेका छोरा , ‘साकार’ र ‘पारस सरकार’ – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारधनि बाउका बि’ग्रेका छोरा , ‘साकार’ र ‘पारस सरकार’
धनि बाउका बि’ग्रेका छोरा , ‘साकार’ र ‘पारस सरकार’
काठमान्डौ- सामाजिक संजालमा बिबादित बनिरहने दुइ पात्र हुन् पारस शाह अनि र्या’पर साकार अधिकारी ।कतिपयले यी दुइ पात्रलाई धनि बाउका बि’ग्रेका छोरा भनेर समेत चि’त्रित गर्ने गरेको पाइन्छ ।
आफूलाई ‘लि’टल बुद्व’ भनेर चिनाउन रुचाउने साकार नेपाली र्या’पर हुन् । साकारले गाएको गीत सुन्दा र हेर्दा उनमा भएको क्षमता यति धेरै छ, जो कोहीलाई अहिले प’त्याउनै मुस्किल पर्छ । सानै उमेरदेखि र्या’प संगीतमा झु’मेका साकार नेपालको सबैभन्दा छिटो र्या’प गाउनेको नाममा उनको नाम अगाडी आउँछ ।
वि’वादित कुराहरु बोलेर फेसबुक लाईभमा आएर चर्चित बनेका र्या’पर साकार अधिकारि अध्यनका लागि अस्टेलिया पुगेका थिए । सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा लाईभ बसेर अ’नेकन गा’ली गरेर उनले नेगेटिभ चर्चा ब’टुलेका थिए ।अस्टेलियामा रहदा श्रेया नाम गरेकी एक युवतीसंग प्रेम रहेको उनी स्वयम बताउँदै आएका थिए ।
स्व. यमबुद्धलाई आफ्नो गुरु मान्ने साकार अष्ट्रेलिया पुग्नासाथ नै सामाजिक सञ्जालमा अ’नेकन ह’र्कत गर्दै आएपछी उनलाई परिवारले नेपाल फर्काएको थियो ।साकार अधिकारीको जन्म सन् १९९४ मा भएको थियो । घट्टेकुलो काठमाडौंमा ज’न्मिएका साकार रोजु अधिकारी र केशव अधिकारीका छोरा हुन् ।
उनि हुने खानेकै छोराको रुपमा गनिन्छन ।तर उनको ह’र्कतले उनि सधै बि’बा’दित बनिरहे ।सकारात्मक चर्चा भन्दा नकारात्मक चर्चाले चिनीए ।उनले परिवारलाइ स’ताए ।यस्तै नकारात्मक चर्चाले सामाजिक संजाल तताईरहने अर्का पात्र हुन् पूर्व युबराज पारस शाह ।
उनलाई उनका समर्थक हरुले पारस सरकार भनेर बोलाउने गर्छन ।निर्मल निवासमा पारसकी पत्नी हिमानी र युवा उमेरका छोराछोरी छन्। वृद्ध भइसकेका बाबुआमा छन्। तर उनी कहिले वि’वादास्पद यु’ट्युबर सोनिका रोकायासँग काठमाडौं र पोखराका रेस्टुरेन्टमा देखिन्थे त कहिले प्रहरीसँग झ’ग’डा गरिरहेका भेटिन्छन्।
पति पारसका क्रि’याकलापले पूर्वयुवराज्ञी हिमानीमा पक्कै पनि आ’क्रो’श सिर्जना गर्दाे हो, साथीभाइ–ना’तेदारका अगाडि अ’नुहार देखाउन अ’प्ठे’रो लाग्दो हो; अनुमान गर्न सकिन्छ। बाबुका वि’वा’दित ग’तिवि’धिका कारण छोराछोरी पनि उत्तिकै ल’ज्जि’त भएका होलान्।
छोरा पारसका उ’दण्डताका कारण बाबु पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि पक्कै अ’सह’ज भइरहको होला; आफूप्रति ना’गरिकको स’हानुभूति ब’ढिरहेका बेला परिवारकै ब’दना’म हुँदा चिन्ता थपिएको होला! यति हुँदाहुँदै पनि सत्य कुरा के हो भने अ’क्षम्य ग’ल्ती गर्दासमेत निर्मल निवासकै प्रयासका कारण पटक–पटक उ’न्मु’क्ति पाएकाले ५० वर्ष पु’गिसक्दा पनि पारसको उ’द्द’ण्ड’ता न’घ’टेको हो।
बेलैमा ध्यान न’पुर्याउँदा उनी परिवारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेका हुन्। थाहा छैन, महाराजगन्जको बीच सडकमा शुक्रबार साँझ पारस प्रहरीसँग बा’झि’रहेको भिडिओ हेरेपछि निर्मल निवासका सदस्यहरूले हेलमेट नलगाएकामा पारसलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरीलाई मनमनै धन्यवाद दिइरहेका होलान् वा ‘ग’णतन्त्र’प्रति आ’क्रो’श पो’खिरहेका होलान्?
सामाजिक सञ्जालमा स’क्रिय रा’जावा’दीहरूको प्रतिक्रिया हेर्दा त उनीहरू त्यो घ’टनामा हेल्मेट नलगाई मोटरसाइकल च’लाउने पारसको ग’ल्ती देखिरहेका छैनन्। बरु प्रहरी ‘ग’णता’न्त्रिक व्यवस्था’का भएका कारण पारसले गरेको दु’र्व्य’व’हा’रलाई जा’य’ज ठ’ह’र्याउने प्रयास गरिरहेका छन्; ग’णतन्त्रलाई गा’ली गरिरहेका छन्।
अ’न्धसमर्थकहरूका यस्ता प्र’तिक्रियाले ५० वर्ष ना’घि’सकेका पारसको म’नोबल पक्कै बढेको हुनुपर्छ। त्यसैले फेरि केही दिनपछि यस्तै ह’र्क’त उनीबाट नहोला भन्न सकिन्न। तर रा’जावादीहरूले गरेको त्यस्तो ‘स’मर्थन’ले निर्मल निवासको इ’ज्ज’त पक्कै बढाउँदैन।
निर्मल निवासले बु’झ्नुपर्छ– जसरी पारसबाट भएका ०५८ अघिका उ’द्दण्ड क्रि’याक’लापको केही न केही मूल्य राजतन्त्रले समेत चु’का’उ’नपर्यो; अहिलेका गतिविधिबाट पनि क्ष’ति निर्मल निवासलाई नै हुने हो, गणतन्त्रलाई होइन। नेपालमा अ’सुरक्षित महसुस गरेपछि पारस २०६५ साउनमा परिवारसहित सिं’गापुर गए।
छोराछोरीलाई त्यहीँ प’ठन–पाठनको व्यवस्था मि’लाइएकाले हिमानीको बसोबास पनि उतै हुन थालेको थियो। तर पारसकै कारण उनी सिंगापुरमा लामो समय रहन सकिनन्। सिंगापुर पुगेको ए’काध महिनामै पारस–हिमानीबीच ख’टप’ट सुरु भयो। २०६५ दसैंताका पारसबाट कु’टि’ए’प’छि हिमानी स्वदेश फर्किन्।
त्यसको केही समयपछि पारस पनि सिंगापुर छा’डे’र थाइल्यान्ड लागे। थाई युवती क’न्नि’का चा’इ’स’र्न’सँग सम्बन्धका कारण उनी थाइल्यान्ड बसोबासका लागि लो’भि’ए’का थिए। तर थाइल्यान्डमा क’न्नि’कासँग ‘लि’भि’ङ टु’गे’दर’का क्रममा पनि पारसबाट एकपछि अर्काे वि’वा’दा’स्पद क्रि’या’क’ला’प भइरहे।
थाइल्यान्डको पर्यटकीय नगरी फु’के’ट’मा रहेका बेला उनी ला’गु’औ’ष’ध सहित पक्राउ परे– ७ कात्तिक २०६९ मा। प्रहरीले उनलाई पु’नःस्थापन के’न्द्रमा राख्न आ’देश दियो। तर छा’ती दु’खे’को ब’हा’ना’मा रि’हा भए। खा’समा था’ई राजपरिवारसँग नेपालको पू’र्वराजपरिवारको सम्बन्धका कारण उनले उ’न्मु’क्ति पाएका थिए।
तर यसपछि पनि व्य’वहारमा सु’धार नआएपछि थाई प्रहरीले १९ मंसिर (०६९) मा उनलाई फेरि पक्राउ गर्यो। नेपालका पूर्वयुवराज थाइल्यान्डमा ला’गु’औ’ष’ध’ सहित पक्राउ परेको खबरले देशकै बे’इ’ज्जत भयो। विदेशमा प’क्राउ परेर आफ्नो, परिवार र मु’लुककै ब’दना’म हुँदा पनि उनले आफ्नो बा’नी–व्य’वहार सु’धा’र्नु आवश्यक सम्झेनन्।
२३ पुस (०६९) मा आफू बसोबासरत फु’के’टस्थित अ’पा’र्टमे’न्ट तो’ड’फो’ड गरे। झ्यालका सि’सा फु’टे। यो घटनामा पक्राउ गर्दा पनि प्रहरीले उनका साथमा ला’गु’औ’ष’ध भेट्यो। मु’क्त हुन १२ लाख थाई भाट (३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ) ज’रिवाना तिनुपर्ने भयो। चा’इस’र्नसँग ‘प्रेम’का कारण परिवारसँग सम्बन्ध बि’ग्रे’का’ले उनीसँग रकम थिएन।
त्यसैले केही रकम नेपालीले उ’ठा’इदिए भने केही बहिनी प्रेरणाले दिइन्। २६ असार (०७१) मा पनि पारस ला’गु’औ’ष’ध’सहित पक्राउ परे, थाइल्यान्डको सु’खुम्भि’तस्थित डे’भिस हो’टलबाट। एकपछि अर्काे का’ण्ड’का कारण थाइल्याण्डमा बस्नै नसक्ने भएपछि उनी १९ चैत २०७१ मा स्थायी रूपमा स्वदेशै रह’नेगरी काठमाडौं फ’र्केका थिए।
काठमाडौं फर्केपछि २–३ वर्ष त्यति वि’वा’दमा परेका थिएनन्, तर फेरि ‘उनी पु’रानै लय’मा फ’र्किंदै छन्। यसैकोे पछिल्लो उदाहरण हो– महाराजगंज चक्रपथको घ’टना। राज्यका नियम–का’नुनको पालना तथा पू’र्वराजपरिवारको इ’ज्जतभन्दा आफ्नै ‘म’र्जी’ उनका लागि ठूलो रहेछ भन्ने कुरा घटनाको भिडिओले दे’खाउँछ।